မြ နှင်း ဆီ – Hlataw.com
ကျနော် လက်တော့ကို ကမန်းကတန်းပိတ်ပြီး တံခါးနားမှာ အသာလေး စောင့်နေလိုက်တယ်၊ အချိန်လေးက သိပ်မကြာပေမဲ့ ကျနော့်စိတ်ထဲ မှာတနာရီလောက်ထင်နေတယ်၊ ကမ်းမွန် မိုးလင်းတော့မယ်၊ လို့ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ထဲ က ပြောနေတယ်၊ ခနနေတော့ ဟောဝေးထိပ်ဆုံးက ယောက္ခမ ကြီးတွေ အခန်းက တံခါး ပြန်စေ့လိုက်သံကြားတယ်၊ သူတို့ တအိမ်လုံးက သစ်သားကြမ်းခင်း မို့ လမ်းလျှောက်လာတဲ့ ရှပ်ရှပ် အသံကြားရတယ်၊ ကျနော်တို့ အခန်းနားမှာ အဟွန့် အဟွန့်၊ ဆိုပြီး ချောင်းဟန့်သံ ကို မတိုးမကျယ်လေး ကြား လိုက်ရတယ်၊ ယောက္ခမ ကြီးတော့ တကယ် လုပ်နေပြီ ဟ၊ လို့တွေးလိုက်မိတယ်၊ မြနှင်းဆီ ကို လှမ်းကြည့် လိုက် တော့လည်း ဆင်အော်လို့တောင် နိူးမဲ့ ပုံ မပေါ်၊ အဲဒါနဲ့ ယောက္ခမကြီး မီးဖိုခန်းထဲ ရောက် လောက်မဲ့ အချိန်မှာ အခန်းတံခါးကို ဖြေးဖြေး လေး ဖွင့်လို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ဖရော်ရီဒါ ရာသီဥတု ကလည်း ကျနော့် အတွက် ဆို တော်တော် နွေးတော့ အိမ်နေရင်း တီရှပ် လက်တိုနဲ့ ဘတ်စကတ်ဘောကစားတဲ့ ဘောင်းဘီ၊ ဒူးလောက် အရှည် ပျော့ပျော့ အသားကို အောက်ခံ မပါပဲ ဝတ်ထား တာ၊ ဆိုတော့ အောက်က ညီတော်မောင်က ခတ်ငေါငေါလေး ထ နေတယ်၊ အခန်းပြင် ရောက်ပြီးတာ တောင်မှ ချီတုံချတုံနဲ့ ဖြစ်နေသေးတယ် နောက်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရဲဆေးတင်ပြီး၊ ဝပ်သယ်ဟက် ငါးမရ လည်း ရေသောက်ပြန်ရုံပေါ့၊ အဟီး မီးဖိုထဲ ရေသောက်ဖို့ လာတယ်လို့ အကြောင်းပြလို့ရတာပဲ၊ ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်၊ မီးဖိုထဲ မှာ မီးမဖွင့်ထားပေမဲ့ ရေချိုးခန်းတခါးဖွင့်ထားပြီး အထဲက မီးလင်းနေတော့ အလင်းရောင်က ရောက်နေတယ်၊ ဒေါ်ကန့်ကော် အဲဒီထဲက ထွက်လာတာ ထင်တယ် ရေခဲသေတ္တာ နားကို လျှောက်လာနေ တာ တွေ့လိုက်ရတယ်၊ သူလည်း ကျနော့်ကို အတိအကျ မျှော်လင့် ထားလားမထားလား တော့ မသိဘူး၊ တွေ့လိုက်ရတော့ ရုတ်တရက် လန့်သွားသလိုပဲ၊ ဆတ်ကနဲတွန့် သွားတယ်၊ နောက် ခနကြောင်ပြီး ရပ်နေတယ်၊ ကျနော့်မျက်စေ့ထဲ မှာတော့ အားပါး မိုက်လိုက်တာလို့ တွေးလိုက်မိတယ်၊ ဘေဘီဒေါ ပန်းနုရောင်ပိုးသား ပျော့ပျော့လေးက ပေါင်ရင်းနားရောက်လောက်အောင်တို တော့ ဖြူဝင်းနေတဲ့ ပေါင်တန် တွေက အဆစ်အမြစ်မရှိဖြောင့်စင်း လိုက်တာ၊ တကယ့် ဆင်ဆွယ် နှစ်ချောင်းလိုပဲ၊ အပေါ်က ပိုးသားပါးပါး မို့ အောက်က ဘရာဇီယာမဝတ်ထားပဲ ထွားမို့လှတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကို တုန်ခါလှုပ်ယမ်းနေတယ်၊ မျက်နှာသွယ်သွယ်၊ ဆံပင်နက်နက် ပုခုံး ကျော်ရုံလေး လောက် အရှည်ကို ကျောမှာ ဖြန့်ချထားပြီး၊ သူ့ရဲ့ အရည်ရွမ်းတဲ့ မျက်ဝန်းကြီးအစုံက အမဲလိုက်သမား ဖြောင်းကနဲ ထိုးလိုက်တဲ့ ဆလိုက်မီးအောက်မှာ
ရုတ်တရက်လန့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ သမင်မ လေးရဲ့ မျက်လုံးအစုံလိုပဲ၊ မထူမပါး လုံးတုန်းတုန်း နှတ်ခမ်းအစုံ နဲ့ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်ကျယ်ကျယ်လေး က မဟတဟ ဖြစ်သွားတာကိုက ကျနော့်ရင်ထဲ ဒိန်းကနဲ ဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်၊ သူလည်း ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ရပ်လို့၊ ကျနော်လည်း ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရပ်ပြီး နှစ်ယောက်သားအူကြောင်ကြောင် တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်မိနေကြတယ်။ ကျနော်က စမှ ရတော့မယ် ဆိုတာသိလို့ ကမန်းကတန်းပဲအာ…မေမေ နိုးနေတာလား…ကျနော် လည်း ရေငတ်လာလို့..အင်း…လာလေ..ဘာယူ မလဲ ရေလား ဂေးတရိတ်လား.. ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် တြိဂံ လိုမျိုးပဲ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဒေါင့် တခုစီကနေ အလယ်က ဒေါင့်တခု ဖြစ်တဲ့ ရေခဲသေတ္တာဆီကို ဦးတည် ပြီးလျှောက်ကြတာ သူက အရင်ရောက်သွားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ထက်တ လှမ်းလောက်ပဲ စောတာပါ၊ ကျနော်နဲ့ တပေလောက်ပဲ အကွာမှာ သူက ရေခဲသေတ္တာ တံခါးကို လှမ်းဖွင့်လိုက်တယ်။ ကျနော်က သူနဲ့ ဘေးတစောင်းလေး မှာ ရပ်ရက်သားမို့လို့ ရေခဲသေတ္တာကို သူလှမ်းဖွင့်လိုက်တော့ ရေခဲသေတ္တာထဲက ထွက်လာတဲ့ အလင်းရောင်က သူ့ညဝတ်အင်္ကျီအပါးလေး ကို ထိုးဖေါက်ပြီး သူ့ ရဲ့ အောင်မြင် ဖွံ့ထွားလှတဲ့ နိူ့ကြီး တွေကို အလုံးလိုက်ကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ရတယ်၊ ကျနော့် ခေါင်းထဲ မှာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး၊ ကျနော် ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ ယောက္ခမကြီးရဲ့ လက်မောင်း ကလေးကို ကိုင်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးကို ကျနော့်ဖက် ဆွဲလှည့် လိုက်တယ်၊ ရုတ်တရက် အံအားသင့်ပြီး ဟ သွားတဲ့ ပါးစပ်ပြဲပြဲလေး ကို ကျနော့် ပါးစပ်နဲ့ ဖိကပ်ပြီး စုပ်နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ …အု….. …ပြွတ်ကျနော့်လက်အစုံကလည်း သူ့ရဲ့ ထွားကျိုင်းလှတဲ့ နိူ့အစုံကို ညဝတ်အင်္ကျီပိုးသားပျော့ပျော့ ပေါ်ကနေပဲ အုပ်ကိုင် ပြီး အားရ ပါးရ ဆုပ်နှယ်ပစ်လိုက်မိတယ်၊ သူ့ရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့ နိူ့သီးခေါင်းတွေက ကျနော့် လက်ဖဝါးကိုတောင် ထိုးထောင် ပြီးထောက်နေတယ်။ သူလည်း ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး၊ ကျနော့် လည်ဂုတ်ကို တွယ်ဖက်ပြီး ရမက် ပြင်းတဲ့ အနမ်းတွေနဲ့ တုန့်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ကျနော့် လျှာက သူ့ နူတ်ခမ်းလှလှလေး ထဲ ထိုးဝင်သွားပြီးသူ့ ရဲ့ စိုစွတ်နွေးထွေး နူးညံ့တဲ့ လျှာ လေးကို သွားပွတ်မိတယ်၊ သူ က သူ့သွားလေး တွေနဲ့ ကျနော့် လျှာကို မနာအောင်ဖွဖွလေး ကိုက်လိုက်လို့ ကျနော် တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတုန်း သူ့ လျှာလေး က ကျနော့် ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်လာတယ်၊ကျနော်လည်း သူ့ လျှာလေး ကို မနာအောင် ကျနော့် နူတ်ခမ်း အစုံနဲ့ စိပြီး ညှပ်ဖမ်းလိုက်တယ်၊အဲလို ကျနော်တို့ ပါးစပ်ခြင်း ကပ်လို့ တိုက်စစ်ဆင်နေတုန်း သူ့ နိူ့ကြီးတွေကို ကိုင်ထားတဲ့ ကျနော့်လက်တွေကို လွှတ်လိုက်ပြီး ညာဘက်လက် နဲ့ သူ့ခါးလေး ကို ဖက်ပြီး ကျနော့်ရင်ဘတ် ဆီကို ဆွဲကပ် လိုက်တော့ သူ့ နိူ့ကြီးတွေက ကျနော့် ရင်ဘတ် ကို အိကနဲ လာကပ်တယ်၊ အားသွားတဲ့ ကျနော့် ဘယ်လက်ဖဝါးက သူ့ ညဝတ်အင်္ကျီအောက်နားက ဝင်ပြီး ပေါင်ခွစုံကို ပင့်ကိုင်လိုက်တယ်၊ ဂျီစတင်း ပိုးသားလေး က ရွဲနေတာပဲ၊ မို့ဖေါင်းနေတဲ့ ယောက္ခမကြီး ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက ကျနော့် လက်ဖဝါးထဲ မှာ၊ ပူနွေးနေတယ်၊ အခုန က မောင်ပျားနဲ့ ချပ်ထားရင်း စိမ့်ကျနေတဲ့ အရည်တွေ ထင်တယ်၊ ဘောင်းဘီ အသား လေးကို ပါပေါက် ပြီးကျနော့် လက်ပေါ်ကို စိုကုန် တယ်၊ ကျနော်က သူ့ အဖုတ်ကို လက်ဖဝါးနဲ့ အုပ်ပွတ်ပြီး တချက်နှစ်ချက် ညှစ်ပေးလိုက်ရင်းက ၊ ဂျီစတင်း ဆိုတော့ ရှေ့ အကာ တြိဂံပုံလေး ဘေးကနေ လက်ချောင်းကို ထိုးထည့်လိုက်တယ်၊ အား၊ တကယ့်ကို စိုရွဲ အိဖေါင်းနေတဲ့ အဖုတ်ကြီးဗျာ၊ အမွှေးလည်း မရှိ ပြောင်ချောနေတာပဲ၊ ကျနော့် လက်က အဖုတ်နူတ်ခမ်း တွေကို တွန်းထိုးပြီး အဖုတ်ထဲကို စပြီး တိုးဝင်တော့ ယောက္ခမ ကြီးက ကျနော့် လက်ကောက်ဝတ်ကို သူ့ လက် နှစ်ဘက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင် ပြီး တွန်းထားတယ်၊ သူ့ ပါးစပ်ကို လည်း ကျနော့် နူတ်ခမ်းက ခွာလိုက်ပြီး၊ …အိုး..နိူး…မောင်ရင်မူး…ဒို့ မဖြစ်သင့်ဘူး..ဆောရီး… ….မမ ကလည်းဗျာ…ဒီအခြေအနေရောက်နေမှ မငြင်းနေပါနဲ့တော့…. ကျနော့်ပါးစပ်က မေမေ လို့ခေါ်မထွက်တော့တာရယ်၊ ပိတောက်ဝါအဖြစ် တွေးမိတာရယ်ကြောင့် မမ လို့ခေါ်လိုက်မိတယ်၊ တဆက်ထဲ ပဲ သူ့ ခါးလေး ကို ဖက်ထားတာ မလွှတ်သေးဘဲ သူ့ အဖုတ် ကို ပြန်နိူက် ဖို့ ကြိုးစား သေးတယ်၊ .အိမ်မှာ လူတွေ အများကြီး ပဲ ..ဘယ်သူပဲ နိူးလာလာ ..မကောင်းဘူးကွယ်… ..အဲဒါ ဆို..ကျနော့်ဟာကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မမရယ်..ပေါက်ကွဲထွက်တော့မယ်… ကျနော်က ပြောပြောဆိုဆို ကျနော့် ဘောင်းဘီကို ခြေသလုံးထိ ဆွဲချပြလိုက်
တယ်၊ မာတင်းထောင်မတ် နေတဲ့ ညီတော်မောင်က ဆီးခုံကနေ ၄၅ ဒီဂရီလောက်ကို ထောင်မတ်နေတယ်၊ကျနော့် ရဲ့ အကြောပြိုင်းပြိုင်း ထပြီး ထိတ်ဖူးက ကြက်သွေးရောင် ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒစ်ကြီးကို ငုံကြည့်ရင်း သူက၊ …အခန်းထဲ မှာ မောင်ရင်မူး မိန်းမ ရှိတာပဲ ကွယ်..သူ့ဆီ သွားပေါ့.. ..ဟင့်အင်း ဒီည မမ ကို မှ ကျနော် မလုပ်ရရင် မဖြစ်တော့ဘူး..ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပဲ… ..အိမ်မှာ လူတွေ အများကြီးမို့ ပါကွာ..ဒို့ ကလည်း မလုပ်ချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး… ကျနော်လည်း သူပြောတာ သဘာဝကျတယ် ဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ရသလောက် စရံ ယူဖို့ တော့ စဉ်းစားလိုက်တယ်၊ …ဒါဆိုလည်း ပုလွေတော့ မှုတ်ပေးသွားပါ မရယ်နော်၊… နောက်ဆုံးတော့ သက်ပြင်းကလေး ချပြီး ဒေါ်ကန့်ကော်တယောက် ကျနော့် ရှေ့မှာ ဒူးထောက် ချလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးကို သူ့ရဲ့ ရှည်လျှားသွယ်ပျောင်းလှတဲ့ လက်ချောင်းလေး တွေနဲ့ ရစ်ပတ် ဆုပ်ကိုင်ရင်း၊ ကျနော့် ဒစ်ဖူး ကြီးကို သူ့ နူတ်ခမ်းလှလှ လေး နဲ့ စငုံလိုက်ပါတယ်။ …အီး…အား… ဒီတခါ ညီးတွားလိုက်ရတာတော့ ကျနော်ပါပဲ၊ ယောက္ခမ ကြီးရဲ့ ပုလွေ ပညာက ကောင်းလွန်းလှသလို သူ့ နူတ်ခမ်းလှလှလေး တွေ ထဲကို ကျနော့်ကောင်ကြီး ထိုးဝင်သွားတာ ကြည့်ရတာတောင် အရသာ ရှိလွန်း လှပါတယ်၊ သူက လျှာကလေး နဲ့ ကျနော့် ဒစ်ဖူး ကို ရစ်ပတ် ရက်ပြီး ပါးစပ်က စစ်ကနဲစစ်ကနဲ စုပ်စုပ်ပေးတာ ကောင်းလွန်းလို့ သူ့ရဲ့ ဆံပင်နက်နက် ပုခုံးပေါ်တင်လေး တွေကို လက်နဲ့ ထိုးဖွ ဆုပ်ကိုင် ထားမိလိုက်တယ်၊ သူက လက်တဘက်နဲ့ ကျနော့် လိင်ချောင်း အရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း နောက်တဘက်က ကျနော့် တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဥတွေကို ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ထားပါတယ်၊ သူ့ ခေါင်းကို တော့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်နဲ့ နူတ်ခမ်းကို တင်းတင်း စိ ကာ ကွင်းတိုက်သလို လုပ်ပေးနေပါတယ်၊ ကျနော့် မှာလည်း ဒီလောက် လှတဲ့ နူတ်ခမ်းကို လိုးနေရပါလား ဆိုတဲ့ အသိ၊
ယောက္ခမကြီးပါးစပ်ကို လိုးနေရပါလားဆိုတဲ့ အသိ၊ အွန်လိုင်းမှာ တချိန်လုံး ပေါက်ကရ ပြောနေခဲရတဲ့ ပိတောက်ဝါကို လုပ်နေရပါလားဆိုတဲ့ အသိ ကြောင့် သိပ်အကြာကြီး မထိန်းထားနိူင်ပဲ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်မိ ပါတော့တယ်၊ ပထမ တချက် အပန်းမှာ သူ့လည်ချောင်းထဲ ပန်းမိ သွားတာ အလေ့အကျင့် မရှိလိုလားမသိ ယောက္ခမကြီးက ကျနော့်လိင်ချောင်းကြီးကို သူ့ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်လို့ နောက်ဆက်ထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်တွေက သူ့ မျက်နှာတွေ ဆံပင်တွေ ပေါ်ကို တဖတ်ဖတ် ကျသွားရပါတော့တယ်။ နေကာမျက်မှန်အမဲကြီးတတ်ထားတဲ့ ဒေါ်ကန့်ကော်က ကျနော့်ကို မပြုံးမရီနဲ့ လက်ဝှေ့ယမ်းပြီး နူတ်ဆက် လိုက်တယ်၊ ကျနော်က သူ့အနား ကို လျှောက်သွားရင်းက ရေထဲ ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ် ရေထဲ မှာ သားနဲ့ ယောက္ခထီးကြီးက တနေရာ မြနှင်းဆီတို့ က တနေရာမှာ သေးသေးလေး တွေပဲ မြင်ရတယ်၊ အခွင့်ကောင်းပဲ လို့တွေးမိတယ်၊ …ရေထဲ မဆင်းဘူးလား …. ကျနော့်ခေါင်းထဲ မှာ မေမေပဲ ခေါ်ရမလား၊ မမ ပဲခေါ်ရမလားအန်တီပဲ ခေါ်ရမလား ဇဝေဇဝါ ကို ဖြစ်နေပါတယ်၊ အဟီး၊ အရင်ကထည်းက ကျနော်က မိန်းမ အကြိုက်မေမေ လို့ သူခေါ်သလို ခေါ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဆို ရင် အန်တီလို့ ခေါ်မိသလို၊ မနေ့ညကတော့ မမ လို့တောင်ခေါ်ခဲ့တာပဲ၊ အဟီး၊ သူ့ ဆီက ဘယ်လို ရီအက် ရှင်းလာမလဲ လို့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ၊ မဆင်းတော့ ပါဘူး မောင်ရင်မူး ရယ်..ဘယ်လိုနေလည်း ရေက နွေးတယ် မဟုတ်လား… ကျနော် သူ့ဘေးက သဲပေါ်မှာပဲ ဖင်ချထိုင်လိုက်ပါတယ်၊ နောက် သူ့မျက်နှာနားကို နည်းနည်းကပ်ပြီး၊ …ည က အရမ်းကောင်းတာပဲ မမ ရယ်၊ မမ က အရမ်းကျွမ်းတာပဲ… ..ဟို..ဟဲ့…မကောင်းပါဘူးနော်..မောင်ရင်မူး ဆောရီး ညက တို့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိလို့. .လူတွေသိသွားရင်၊ ငါးပါးတော့ မှောက်တော့မှာပဲကွာ… ..ဘယ်သူမှ မသိစေရပါဘူး မမ ရယ်၊ ကျနော်လည်း ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဘယ်အပျက်ခံပါ့မလဲ… …အင်း တို့ နောက်ထပ်မမှားအောင် ဆင်ခြင်ကြရမယ်နော်… ..ဟင့်အင်း အဲဒါတော့ ကျနော်သဘောမတူ နိူင်ဘူး မမ ရယ် ကျနော်တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တနေရာမှာ ဆုံကြရအောင်နော်..ဟင့်အင်းကွာ မဖြစ်နိူင်ပါဘူး..ညက အဖြစ်အပျက်ကို မေ့လိုက်ပါတော့ မောင်ရင်မူးရယ်…အန်တီ့ကို သနားရင်…နော် အန်တီ တောင်းပန် ပါတယ်… ဘယ်လို မေ့လို့ရမှာလဲ မမ ရယ်၊ ကျနော့်ကို
သနားရင် လည်း အနည်းဆုံးတခါလောက် တော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ခွင့်ပေးပါလား၊ အဲဒါပြီးရင် နောက် မမ ဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်းနေပါ့မယ်.. ..ခက်တော့တာပါပဲကွယ်… ..မမ ဒီညနေ အကြောင်းတခုခု ပြပြီး ထွက်လာလို့ရမလား..ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ တွေ့စရာရှိလို့ဆိုပြီးထွက်သွားမယ်၊ သိပ်အကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူး တနာရီလောက်ပဲ. လေ.. ….မဖြစ်နိူင်ပါဘူးကွာ…ဟေ့ အနားသိပ်မကပ်နဲ့ ဟိုမှာ သမီးတို့ ပြန်လာနေကြပြီ…. ….နာရီဝက်ဗျာ..မမ..ကဲ နာရီဝက်ပဲ ပေး ကျနော် အရင်ထွက်သွားမယ်..မမ အိမ်က ထွက်လာတာနဲ့ ဖုန်းခေါ်လိုက်၊ ဘယ်မှာတွေ့ မလဲ ဆိုတာ ကျနော် ပြောမယ်… …အင်းအင်း ကဲကဲ တို့ ကြည့်လုပ်ကြည့်မယ် သွားသွား သမီး တို့ တမျိုးထင်နေမယ် နည်းနည်းခွာကွာ တို့နားသိပ်မကပ်နဲ့… ..အင်း..ကျနော် ညနေ ၅ နာရီလောက် ထွက်သွားမယ်နော်..ဖုန်းခေါ်လိုက်… ကျနော်လည်း သူ့ဆီက စကားပြန်တောင် မစောင့်တော့ပဲ၊ ထပြီး အိမ်သာဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်၊ သေးပေါက်ချင်တာနဲ့ရော၊ ဖြစ်နိူင်ခြေ ရှိတဲ့ အလားအလာကြောင့်ရော ညီတော်မောင်က ကျနော့် ဘောင်းဘီ အောက်မှာ ကုန်းရုန်းထ နေပါတော့တယ်။ညနေလောက်ကျတော့ ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံဖို့ ချိန်းထားတယ် ဆိုပြီး၊ ယောက္ခထီးကြီး ရဲ့ လက်ဆပ်အီးသရီးဖစ်ဖတီးလေး မောင်းပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ် ကို မျက်နှာပြုထားတဲ့ ဟော်တယ် တခု ကို ဝင်ပြီးတော့ ကင်းဘက် တလုံးထဲ ပါတဲ့ အခန်းတခုကို ယူလိုက်ပါတယ်၊ ဈေးတော့ နည်းနည်း ကြီးပေမဲ့ စားရမှာနဲ့ တွက်လိုက်ရင်တော့ တအားတန်ပါတယ်၊ နောက်ဟော်တယ်ဘေးနားက ကွန်ဗီးနီရန့် စတိုးလေး တခု သွားပြီး ရက်ဘူး နှစ်ဗူးလောက်နဲ့ ဝိုင်အနီတလုံးဝယ်ပြီး အခန်းပေါ် တက်လာ ခဲ့ပါတယ်၊ အခန်းကလည်း ဈေးကြီးပေးရကျိုးနပ်ပါတယ်၊ ပင်လယ်ဘက် မှာ ဝရံတာတောင်ပါသေးတယ်၊ ဝရံတာ တခုလုံးနီးပါးက မှန်ချပ်အပြည့်နဲ့ ဖရန့်ဒိုး ဆိုတော့ လေတိုက်မခံချင်လို့ တံခါးပိတ်ထားလည်း ပင်လယ်ပြာပြာနဲ့ ဟိုးမိုးကုတ် စက်ဝိုင်းကို လှမ်းမြင်နေရတယ်၊ ရက်ဘူးတလုံးအကုန်မှာတော့ ကျနော့်ဆဲဖုန်းက အသံမြည်လာပါတယ်၊အိုင်ဒီကြည့်လိုက်တော့ ယောက္ခမ ကြီးပေါ့၊ ကျနော် ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ လူပျိုလေး လို ရင်ခုံနေတယ်ဗျ၊ …ဟဲလို…. …ဟဲလို..မောင်ရင်မူးလား… …ဟုတ်..မမ.. အဆင်ပြေလား..အခု ဘယ်မှာလဲ…. …အင်း ..တို့ အခု အိမ်က ထွက်လာပြီ…မင်းဘယ်မှာလဲ… …ကျနော်.အတလန်းတိတ်အဲဗဲနူးပေါ်က ရီဂျင်စီမှာ…. ကျနော် ဒါရိုက်ရှင်း နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့ သူသိသွားပြီး၊ အိုကေ ဆိုပြီး ဖုန်းချကာနီးမှာ ကျနော်က အခန်းနံပါတ် ပြောလိုက်ပါတယ်၊ စောင့်လိုက်ရတဲ့ အချိန်က နာရီဝက်လောက်ပေမဲ့ တကမ္ဘာလောက် ကြာတယ်ကို ထင်ရတယ်၊ တံခါးခေါက်သံ ကြားလို့ ကျနော် ဆွဲဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ဒေါ်ကန့်ကော်၊ မျက်နှာက တမျိုးဖြစ်နေတယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားတာလား၊ ဒေါပွနေတာလား၊ လူမြင်သွားမှာစိုးလို့ လန့်နေတာလား မသိ၊ကျနော် က သူအခန်းထဲ ရောက်လာတာနဲ့ ဟော်တယ် အခန်းတံခါးကို ပိတ်ပြီး ဂလန့်ထိုးလိုက်တယ်၊ …မောင်ရင်မူး..တို့ စကားနည်းနည်းပြောကြရင်ကောင်းမယ်… …ဟုတ် မမ ဘာပြောချင်တာလဲ… ကျနော်က သူ့လက်လေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တော့ ဖြတ်ကနဲ ရုန်းထွက်သွားတယ်၊ …မနေ့ည က တို့ အမှားလုပ်မိသွားတယ်၊ အဲဒီအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ရှေ့ရှောက် မမှားကြရင် ကောင်းမယ်လို့ ပြောချင်တယ်… ..ဟင့်အင်း မမ ကလည်း မှားတယ်လို့ ကျနော် မထင်ပါဘူး၊ မမ ရယ်၊ တကယ်လို့ ရှေ့ရှောက် မမှားချင်ရင်လည်း ဒီတခါတော့ နောက်ဆုံး ခွင့်ပြုနော်… ပြောပြောဆိုဆိုပဲ ကျနော်က ဒေါ်ကန့်ကော်ကို လက်မောင်းနှစ်ဘက်က ကိုင်ပြီး ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်ကာ နူတ်ခမ်းလှလှလေး ကို ဖိစုပ်နမ်းလိုက်ပါတယ်၊ ပထမတော့ ယောက္ခမကြီးက အင်တင်တင် ဖြစ်နေပေမဲ့ သူလည်း မနေနိူင်ဘူးထင်ပါတယ် ပြန်လည် တုန့်ပြန်လာတဲ့ အနမ်းတွေက ကျနော်တောင် ဖျားသွားတယ်၊ အမလေး ကျွမ်းသလား မမေးနဲ့၊ ဒါကြောင့်လည်း ညတုန်းက သူ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ကျနော် မထိန်းနိူင်ပဲ ထွက်သွားရတာပေါ့၊ ကျနော့် လက်တွေက သူ့ ဖင်လုံးကြီးတွေကို သူဝတ်ထားတဲ့ နွေရာသီ ဒရက်စ် ပေါ်ကပဲ ပွတ်သပ် ဆုပ်ညှစ်နေမိတယ်၊ နောက်တော့ ကျနော့်ကောင်ကြီးကလည်း အရမ်းတင်းနေပြီမို့ သူ့အင်ကျီအောက်ခြေက
ကိုင်ပြီး ခေါင်းပေါ်ကနေ မ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုတော့ သူ့လက်ကလေး နှစ်ဘက် မြှောက်ပြီး ကူညီရှာတယ်၊ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ သွယ်လျလျ နဲ့ မမျှ အောင် ကြီးမားလှတဲ့ နိူ့ကြီး နှစ်လုံးက ဘရာဇီယာအောက်မှာ ယိမ်းထိုးနေတယ်၊ ကျနော် က အဓိကနေရာကို အရင်တိုက်ခိုက်ဖို့ အကြံနဲ့ သူ့ အသားရောင် ပင်တီလေးကို ခါးသရေကြိုးကနေ ဆွဲချွတ်ချ လိုက်တယ်၊ အမွေးတွေ ပြောင်အောင်ရိတ်ထားလို့ ဖောင်းမို့နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးက နူတ်ခမ်းအဖတ်လေး ညိုညို တိုတိုနဲ့ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တဲ့ ကျနော့် မျက်နှာရှေ့ တည့်တည့်မှာပေါ့၊ ကျနော်က သူ့ ပေါင်တလုံးကို မ ပြီး သူ့ အဖုတ်နဲ့ ကျနော့် ပါးစပ်ကို ဖိကပ်လိုက်တယ်၊ အ ကနဲ အသံနဲ့ အတူ ခြေတဘက်ထဲ မို့ လဲ မကျအောင် ကျနော့်ခေါင်းကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ထိန်းထား တဲ့ အချိန်မှာ ပဲ ကျနော်က ကျနော့်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ရက် အစွမ်းတွေကို အကုန်ထုတ်လို့ ယောက္ခမကြီးကို ကော့ပြန်ထွက်အောင် မှုတ်ရက်စုပ် လုပ်ပေးနေမိတယ်၊ ခေါင်းထဲ မှာ မြနှင်းဆီ ဒီအပေါက်က ထွက်လာတာပါလားလို့လည်း ကပ်သည်းကပ်သပ်သွားတွေးမိသေးတယ်၊ အဟီး၊ ကျနော်လုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ အဖုတ်လေးဖုတ်ရဲ့ အမေရဲ့ အဖုတ်ကို မှုတ်နေရပါလား၊ လို့ တွေးရင်း စိတ်လည်း တအား ထက်သန်လာရတယ်၊ သူ့စောက်ခေါင်းထဲ ကို ကျနော့်လျှာဝင်နိူင်သလောက်ထိုးသွင်းရင်းကမှ စောက်စေ့နေရာ ဖုဖု လေးကို လျှာထိတ်နဲ့ ထိုးထိုးပေးတော့ ဒေါ်ကန့်ကော်တယောက် အင်းအင်းနဲ့ အရည်တွေ ပိုစိမ့်ကျ လာပါတယ်၊ ကျနော်လည်း ဇက်လည်းညှောင်း၊ လီးလည်း ညှောင်းလာပြီမို့ ကျနော့်ပါးစပ်ကို သူ့အဖုတ်က ခွာပြီး အခန်းလည်က ကင်းဘက် ကြီးရှိရာကို လက်ဆွဲ ခေါ်သွားလိုက်ပါတော့တယ်၊ မွေ့ယာအိအိ ကြီးပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် ကိုယ်တပိုင်းကို ပက်လက်လှန်စေပြီးမှ ယောက်က္ခမ ကြီး ပေါင်နှစ်လုံးကြားဝင်၊ ပေါင်နှစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်တင်လို့ ကုတင်ပေးမှာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး၊ မိချောင်း အမြီးခတ်သလို တဖုန်းဖုန်းနဲ့ ဆောင့်လိုးပစ် နေမိပါတော့တယ်၊ ယောက္ခမကြီးကလည်း မွေ့ယာခင်း ကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကျစ်ကျစ် ဆုပ်ရင်း၊ မျက်လုံးကို စုံမှိတ်လို့၊ အင့်အင့် နဲ့ နေအောင်ကို ကောင်းခန်းတွေ့နေရပါတယ်၊ ယောက္ခမကြီးမလာခင်ကတည်းက အတွေးနဲ့ တောင်နေရတဲ့ လီးမို့ သိပ်အကြာကြီး မထိန်းထားနိူင်ပါဘူး၊ အချက် သုံးလေးဆယ်လောက်မှာပဲ၊ သုတ်ရည်တွေ ပူကနဲ ပူကနဲ ပန်းထုတ်ရင်း တချီ ပြီးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ ယောက္ခမကြီးလည်း ပြီးသွားပုံရပါတယ်၊ ကျနော်က ကိုယ့်ကောင်ကြီးကို သူ့ အဖုတ်ထဲ စိမ်ထားရက်က သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ငုံ့ပြီး သူ့ နူတ်ခမ်းလေးကို လှမ်းစုပ်လိုက်တော့ သူက လက်တွေနဲ့ ကျနော့်လည်ကုတ် ကိုဖက်တွယ်ပြီး ပြန်နမ်းပါတယ်၊ သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကတော့ ကျနော့် ခါးထစ်ကို ညှပ်ထားပြီး ကျနော့်ဖင်နောက်မှာ သူ့ခြေကျင်းဝတ်နှစ်ခုကို ချိတ်ထားတယ်၊ ကျနော့် ကောင်ကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်ချင်ရင်တောင် ထုတ်လို့မရအောင် ဆွဲသွင်းထားတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ၊ ကျနော်တို့ အဲဒီပုံစံလေး နဲ့ ခနနားနေရင်းက မှ ကျနော်က ထလိုက်သလို သူလည်းထလာတယ်၊ သူက အရင် ရေချိုးခန်းထဲ ကို ဝင်သွား တာမို့ ကျနော်က နောက်က လိုက်သွားခဲ့လိုက်တယ်၊ အပေါ်က ဘရာဇီယာ ပဲ ရှိပြီး ဖင်ပြောင်နဲ့ ရေချိုးခန်း
ထဲ ကို ပြေးဝင်သွားတဲ့ ယောက္ခမ ကြီးကို ကြည့်ရတာ ပြုံချင်စရာပဲ ၊ ခိခိ၊ ကျနော်လည်း ခတ်တည်တည် ပဲ လီးပျော့ကြီးတန်းလန်းနဲ့ လိုက်သွားတာပေါ့၊ အဟီး၊ အသေးစိတ်တွေ ခင်ဗျားတို့ ပျင်းနေမလားမသိဘူးဗျာ၊ ကျနော်တို့ ရေဆေးပြီးတော့ ရေချိုးခန်းထဲက တဘက် တယောက်တထည်စီ ခါးမှာပတ်ပြီး ဝိုင် တယောက်တခွက်နဲ့ ထိုင်သောက်ရင်း စကားနည်းနည်း ပြောဖြစ်တယ်၊ ထုံးစံအတိုင်း ယောက္ခမ ကြီးက ဒါနောက်ဆုံးပဲ ပေါ့၊ နောက် ဆို ဆင်ခြင်ဖို့၊ စသဖြင့်ပြော၊ ကျနော်ကလည်း လောလောဆယ်လုပ်ရရင်ပြီးရော အကုန်သဘောတူပြစ်တာပဲလေ၊ အဟီး၊ ခနနေနားပြီးတော့ အချိန်ရှိခိုက်လုံးလ စိုက်ရမယ် မဟုတ်လား၊ သူ့အနားပွတ်သပ်ကပ်ပြီး ကုတ်ကလေးနမ်းလိုက်၊ ဟိုချွဲဒီချွဲ နဲ့ဘရာဇီယာကို ရအောင်ချွတ် ပြီး နိူ့စို့ ပစ်လိုက်တယ်၊ သူ့နိူ့ကြီးတွေကတော့ အယ်တယ်ဗျ၊ ကြီးလည်းကြီး တော့ နည်းနည်း တော့ အောက်ကို ကျချင်နေပြီ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ ထင်သလို အဖွားကြီးတွေလိုသေးသေးလေးနဲ့ ဗိုက်နားရောက်နေတာ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ အဟီး၊ တော်တော့်ကို ကြည့်လို့ကောင်းတာ၊ မောင်ရင်မူး ရယ် မင်းကတော့ ခက်တော့တာပဲ နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ တအင်းအင်း ဖြစ်လာရတာပေါ့၊ အဟီး ၊ ဒီတခါတော့ ဘယ်ရမလဲ စိမ်မြေနပြေနဲ့ ခပ်ကြာကြာ လေးကို ဆွဲဖြစ်လိုက်တယ်၊ ပုံမှန်ဆိုရင် ကျနော်က တချီထဲ မှာ ဘယ်တော့မှ ပုံစံပြောင်းလေ့ မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ယောက္ခမကြီးက ဒါနောက်ဆုံး၊ ဒါနောက်ဆုံး ဆိုပြီး တချိန်လုံးပြောနေလို့ တန်အောင်ဆိုပြီး ပုံစံ သုံးလေးမျိုးပြောင်းပစ် လိုက်တယ်၊ အဟီး၊ ပထမ လေကြီးထိုးရိုးရိုးနဲ့ စ တယ် ပြီးတော့တခြမ်းစောင်း ခိုင်းပြီး တပေါင်ကျော်လုပ် တယ်၊ နောက်တော့ လီးကို သူ့အဖုတ်ထဲက မချွတ်ပဲ နဲ့ မှောက်ခိုင်းရင်းကိုယ်က ဒူးထောက်ရက်နဲ့ ဒေါ့ကီ လေးဘက်ထောက်ဆွဲတယ်၊ အဲဒီမှာပဲ သူက တချီပြီးသွားလို့ တတောင်ထောက်ထားတာ ပြုတ်ကျ သွားပြီး ၊မျက်နှာကို ခေါင်း အုန်းနဲ့ အပ်ထားတော့ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးသလိုဖြစ်သွားတော့ ကျနော့်လည်း အပေါ်ကနေ ဖိဆောင့်ရင်း ကောင်းကောင်းကြီး အရသာတွေ့နေရတာပေါ့၊ သူ့ ခရေပွင့်လေးကို ပါ တံတွေးထွေးထည့်ရင်း ဆွပေးလိုက်တော့ သူ့ ခမျာမခံနိူင်ရှာဘူး ဖင်ကြီးကော့ကော့ပေးလာရတာပေါ့၊ အဲဒီမှာ ကျနော့်လက်ညိုးနဲ့ လက်ခလည်လဲ သူ့ ခရေပွင့်လေးထဲ ဝင်ထွက်နိူင်ရော ကျနော်လည်း ဒုတိယ အချီကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပေါက်ကွဲ ပြီး ပြီးသွားခဲ့ရတာပေါ့၊ ဒီတချီ အပြီးမှာတော့ ရေသွားမဆေးတော့ဘူး၊ ဒေါ်ကန့်ကော်ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပဲ အနောက်က ဖက်ထားရင်း ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်အိပ်ယာပေါ်မှာ နားနေကြတော့တယ်၊ နာရီကို မသိမသာ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အခု မှ တနာရီလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်၊ အဟီး နှစ်ချီပြီးသွားပြီ၊ နောက်တနာရီ လောက် အချိန်ရသေးတယ် ဆိုပြီး၊ အသာလေး နှပ်နေလိုက်မိပါတယ်။ လူလည်း တကယ်တော့ ချက်ချင်း မထောင်နိူင်တော့ပါဘူး၊ အချိန်နည်းနည်းယူရမယ် ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိနေပါတယ်။ ယောက္ခမကြီးလည်း မောပြီး အိပ်ပျော်သွားသလား မသိဘူးဗျ၊ ကျနော်လည်း ရက်ဘူး ရယ် ဝိုင်ရယ် အရှိန်နဲ့ နှစ်ချီဆက်တိုက်ထုတ်လိုက်ရတာနဲ့ ဆိုတော့ မှေးကနဲ ကို အိပ်မောကျ သွားတယ်၊ ကျနော်
ရုတ်တရက် ပြန်နိူး လာတော့ ယောက္ခမ ကြီး အသက်ရူသံ မှန်မှန်လေးနဲ့ အိပ်ပျော်နေတုန်းဗျ၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးက တော့ ကျနော့် မနိူးခင်ထဲက နိူးနေပုံပဲ ထောင်မတ်နေပြီ၊ ကျနော်တို့ အိပ်မောမကျ မှီ ခြုံထားမိလိုက်လို့ ကွန်ဖေါ့တာ အောက်မှာ ကျနော်တို့ ချွေးတောင်နည်းနည်း စို့နေပြီ၊ ကျနော်က ကျနော့်ကိုယ်ပေါ်က ကွန်ဖေါ့တာကို ပဲ အသာလေး ခွာချလိုက်တယ်၊ ကျနော့်ကို ကျောပေးအိပ်နေတဲ့ ယောက္ခမကြီးရဲ့ ကျောပြင်နဲ့ သေးကျင်တဲ့ခါး၊ ဝိုင်းစက်ကားတက်လာတဲ့ တင်ပါးတွေက ကျနော့် မျက်စေ့တည့်တည့်မှာ ဝင်းကနဲ ပေါ်လာတယ်လေ၊ ယောက္ခမ ကြီးက ကွေးကွေးလေး အိပ်နေတာမို့ ကျနော်က ကိုယ်ကို အသာ လေး အောက်လျှောဆင်းပြီး ထောင်မတ်နေတဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးရဲ့ ခေါင်းနဲ့ သူ့တင်လုံးကြီး နှစ်ခုကြား အသာလေး ထိုးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်၊ ကျနော့် ညီတော်မောင်ရဲ့ ခေါင်းက သူ့ခရေပွင့်လေးကို ထိုးစမ်းနေတာ ကို ခံစားမိလို့ထင်တယ် ယောက္ခမကြီး နိူးလာတယ်၊ လေသံလေးနဲ့၊ …လိုးရှင်းသုံးနော် မောင်ရင်မူး..မင်းကောင်ကြီးက အလုံးတုတ်တယ်… ယောက္ခမ ကြီးရဲ့ မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ကျနော် အရမ်းကို ဝမ်းသာ သွားတယ်၊ ကုတင်ဘေးအံဆွဲထဲ မှာ ကျနော်အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ လိုးရှင်း အထုပ်လေးရယ်၊ ကွန်ဒန် အထုတ်လေးရယ် လှမ်းယူလိုက်တယ်၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးမှာ ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး၊ လိင်ဆက်ဆံ ရင်သုံးဖို့ရောင်းတဲ့ အဆီထုတ်ကလေးကို ဖေါက်၊ အဲဒီမှာ လိမ်းလိုက်တယ်၊ ကျန်တဲ့ အဆီတွေကို လက်ထိပ်နဲ့ ယူပြီး ယောက္ခမ ကြီးရဲ့ ခရေပွင့်မှာလည်း လိမ်းပေးတယ်၊ အတွင်းထဲကို လည်း လက်တဆစ်လောက်ထိ ထိုးသွင်း ပြီး ချောဆီ ထည့်ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့မှ ကျနော့် ညီလေး ခေါင်းကို တဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းတော့တယ်၊ …အ..အ..အား..ဖြေးဖြေး..မောင်ရင်မူး..မလောနဲ့.. …ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့..မမ.. ဒေါ်ကန့်ကော်က သူ့လက် နဲ့ နောက်ပြန်လှမ်းပြီး သူ့ခါးကိုကိုင်ထားတဲ့ ကျနော့်လက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်၊ သူစိုးရိမ်တာကို သိတာ ပြတဲ့အနေနဲ့ ကျနော် စိတ်ရှည်ရှည်ထား ပြီး တထစ်ခြင်း တထစ်ခြင်းသာ သွင်းပေးပါတယ်၊ ကျနော့်ကောင်ကြီး တဝက်လောက် ရောက်မှာတော့ ရပ်ထားလိုက်ပြီး အနောက်ကနေ သူ့နိူ့ကြီးတွေကို လှမ်းကိုင်ပြီး ဆုပ်နှယ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်၊ ခနနေတော သူအသားကျသွားပုံရပါတယ်၊ သူ့ဖင်ကြီးကို ကော့ပေးလိုက်တာ၊ ကျနော့်ညီတော်မောင် အဆုံးထိ ဝင်သွားပါတော့တယ်၊ အဲဒီအခါမှာတော့ ကျနော်စလှုပ်ရှားပြီပေါ့၊ ပထမတော့ ဖြေးဖြေး နောက်တော့ တဖတ်ဖတ် တဖုန်းဖုန်း၊ ယောက္ခမကြီး ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး သူ့ဖင်ကြီးတွေ တုန်ကနဲတုန်ကနဲ နေအောင် ဆောင့်လုပ်နေမိပါတော့တယ်၊ ယောက္ခမ ကြီးရဲ့ ညှစ်အားကြောင့် ဒီတခါလည်း ပူကနဲ နေအောင် သုတ်တွေ ထွက်ပြီး ပြီးသွားရပြန်ပါတယ်၊ ဒီတချီ အပြီးမှာတော့ ရေမိုးချိုးပြီး ပြန်ကြမယ်လို့ ပြင်ပါတယ်၊ ကျနော် လည်း အာရိုက်ရင်း ဝိုင်လေး ထပ်ငှဲ့ပေး ပြီး အပျော့ဆွဲလို့၊ မပြန်ခင် နောက်ဆုံးအချီလေး ရအောင် ဆွဲလိုက်ပါတယ်၊ အဲဒီနောက်ဆုံး အချီမှာတော့ ဖြေးဖြေးချင်း ပဲ ဇိမ်ဆွဲ အရသာခံ လုပ်မိပါတယ်၊ ထူးထူး ဆန်းဆန်း မဟုတ်ပဲ လှေကြီးထိုးရိုးရိုး ပဲ လုပ်မိပါတယ်၊ ယောက္ခမကြီးရဲ့ ချောမော ကျက်သရည်ရှိလှတဲ့ မျက်နှာကို မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်ရင်း လုပ်နေရတာကိုက အရသာရှိလွန်းလှပါ
တယ်၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဖီးလာနေ လို့ထင်တယ်၊ ရောက်ကာစ တုန်းကလို ကျနော်နဲ့ မျက်လုံးချင်း မလွဲတော့ပဲ ကျနော့်ကို ပြုံးစစနဲ့ စူးစူးရဲရဲ ကာမ ဇောကြီးတဲ့ ဟတ္တဏီ အကြည့်မျိုးနဲ့ ပြန်ကြည့် ရင်း အောက်ကလည်း ကော့ပေးလိုက် စကောဝိုင်းပေးလိုက် လုပ်ပေးနေပါတယ်၊ အဲဒီနောက်ဆုံးအချီက တော်တော့်ကို ကြသွားခဲ့ကြပြီး သူရော ကျနော်ရော နှစ်ယောက်စလုံး တယောက် အထာ တယောက်သိ ပြီး အတူတူ ပြီးလိုက်ကြလို့ ကာမ စိမ်းစည်အထွတ်အထိတ် ကို ရောက်သွားခဲ့ကြရပါတယ်၊ ….ကောင်းလိုက်တာ မမ ရယ်..ကျနော်တော့ ဘယ်လိုမှ မေ့နိူင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး… ….တို့လည်း အတူတူ ပါပဲ မောင်ရင်မူး ရယ်….. တဲ့ဗျာ။ကျနော် ဘယ်လောက်တောင် အိပ်မောကျ သွားသလဲ ဆိုတော့ ၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးကို စိုစို စွတ်စွတ် နွေးနွေး ထွေးထွေးနဲ့ ပါးစပ် တခုက လာစုပ် ပေးနေတာ ခံစားလိုက်ရလို့ လန့်သွားတယ်၊ ဟာ ဒုက္ခ ပါပဲ ငါ ဒီဟော်တယ်မှာ ယောက္ခမ ကြီးကို လုပ်ရင်း အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ၊ ဘယ်အချိန်တောင် ရှိပြီလည်း မသိဘူး၊ အိမ်မှာ မိန်းမ တော့ မျှော်နေတော့မယ်၊ ဟင် ဒေါ်ကန့်ကော်လည်း မပြန်သေးဘူးပေါ့ဒါ ဆိုရင်၊ အိမ်က လူတွေ သိကုန်ရင်တော့ ဒုက္ခ ပါပဲ၊ ဆိုပြီး လန့်ဖြန့်သွားလိုက်တာ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှ ယောက္ခမ တွေအိမ် က ကိုယ့်အခန်းထဲ ကိုယ်ပြန်ရောက်နေတာ တွေ့လိုက်ရလို့ စိတ်အေးသွားတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကောင်ကြီး ကတော့ အစုပ်ခံနေရတုန်းပဲ၊ ဟင်၊ မြ ပါလား၊ ဘယ်တုန်းက ပြန်ရောက်လာလဲ မသိဘူး ငါလည်း အိပ်ပျော်သွား လိုက်တာ၊ မိန်းမ အပြန် တောင် မစောင့်မိ တော့ဘူး၊ တရေးအိပ်လိုက်ရလို့ အားလည်း ပြည့်သွားတာရယ်၊ သူ့သခင်မ နဲ့ ကျွမ်းဝင်နေတဲ့ ကောင်ကြီးမို့ အခုတော့ သူက ဖောင်းတင်း မာတောင်နေပြီ၊ မြနှင်းဆီကလည်း ဗစ်တိုးရီးယား စီးခရက် ဘေဘီဒေါ လေးနဲ့၊ ဟင့် အဲဒါ ဟို ဇီဇဝါ ယူဝတ် ခဲ့ဘူးတဲ့ ဟာလေး မဟုတ်လား၊ စိတ်ထဲက လျှောက်တွေးနေပေမဲ့ လက်ကတော့ အလိုလို ၊ မြနှင်းဆီရဲ့ အုပ်ကောင်းလှတဲ့ ဆံပင်ထူထူ ကြီးထဲ လက်ချောင်းတွေ ထိုးဖွ ကစားရင်း သူ စုပ်ပေးနေတဲ့ အရသာကို ဇိမ်ခံနေမိတယ်၊ ညနေက မှ သူ့ အမေ စုပ်ပေးတာ ခံ ခဲ့ရပေမဲ့
လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ချင်း မတူတာကြောင့်လည်း တမျိုးလေး ခံစားလို့ကောင်းနေ လိုက်တာ၊ မြနှင်းဆီ ပါးစပ်ထဲ မှာ ပြီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မိန်းမ က သူ့ပါးစပ်ထဲ ထုတ်ပစ်တာ မကြိုက်ဘူး ဆိုတာ သိထားတော့ သူ့ ပါးစပ်ထဲက ကိုယ့်ကောင်ကြီးကို ဆွဲထုတ် ပြီး သူ့ ကို ဆွဲ ပက်လက်လှန် ပြီး သူ့ ပေါင် နှစ်လုံးကြား ဝင်လိုက်တယ်၊ သူ့ ဘေဘီဒေါ ညဝတ်အင်းကျီက အလိုလို ခါးပေါ် ရောက်နေပြီ ဆိုတော့ ကျနော့်ကောင်ကြီးကို သူ့ ရဲ့ အမွှေး အမြှင် မရှိ လို့ ပြောင်ဝင်းနေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်း ဖောင်းကြီး အဝမှာ တေ့ပြီး အသာလေး ဖိသွင်းလိုက်တယ်၊ ဟ မိန်းမ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ရွဲနေလိုက်တာ ရက်ရက်စက်စက် ပဲ အဖုတ်ထဲ မှာ ရေအိုင်နေလား အောင်းမေ့ရတယ်၊ ဘာတွေ စိတ်ထ လာလဲ မသိဘူး၊ အဲဒါက အရေးမကြီးတော့ဘူး၊ အခု ကိုယ်လည်း တင်းနေပြီ ဆိုတော့ မညာမတာပဲ ဖိဆောင့်ပစ်လိုက်တယ်၊ …အင်း…..အီး….. အရည်တွေက အရမ်းအိုင်ထွန်းနေတော့ ချောချောမောမောပဲ ဝင်သွားတယ် ပြီးတော့ သူက လည်း မျက်လုံးလေး မှေးပြီး အရမ်းကို ဖီးတက်နေတဲ့ပုံဖြစ်နေတာနဲ့၊ ကျနော်လည်း သူ့ပေါင်လုံးကြီး နှစ်လုံးပုခုံးပေါ် ထမ်းပြီး တဖေါင်းဖေါင်းကို ပစ်ဆောင့်ပစ်နေမိပါတော့တယ်၊